घ’टनाको ४ दिन पछि सुशान्तको दे’ह’त्या’गको कारण खुल्यो बलिउडमा तरङ्ग ल्याउने नयाँ रहस्य ! – Jagaran Nepal
घ’टनाको ४ दिन पछि सुशान्तको दे’ह’त्या’गको कारण खुल्यो बलिउडमा तरङ्ग ल्याउने नयाँ रहस्य !
बलिउड अभिनेता सुशान्तसिंह राजपुतको घ’टना प्र’क’ रणमा बलिउडको अ’सहिष्णु र परिवारवादको राजनीतिले भूमिका खेलेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा ब’हस सुरू भएको छ। राजपुतका सपना भवानी, अनुभव सिन्हा र निखिल द्विवेदीलगायतका साथीहरूले बलिउडको पा खण्डी शैलीको च र्को आ लोचना गरेका छन्। बलिउडमा पा खण्ड मौलाएको भन्दै बलिउड अभिनेत्री कंगना रनावटले पनि च’र्को आ’लोचना गरेकी छन्। इन्स्टाग्राममा एक भिडिओ पोस्ट गर्दै उनले सुशान्तको दु:खद् अवसान देहत्याग हो या यो’जनाब’द्ध ह ,त्या हो भन्दै बलिउड उद्योगप्रति प्रश्न उठाएकी छन्।
‘तपाईंले उसका पछिल्ला पोस्टहरू हेर्नुस्, आफ्नो बलिउडमा कोही गडफादर नभएकाले स्पष्ट शब्दमा उसले मानिसहरूलाई उसको फिल्म हेर्न भनेको छ। फिल्म नहेरिए आफू उद्योगबाट बाहिर फालिने चिन्ता व्यक्त गरेको छ। उसले अन्तर्वार्तामा उद्योगले आफूलाई किन आफ्नो मानेको छैन? भनेका छन्। उनले आफू बलिउडमा फाल्टु जस्तो महशुस गरिरहेको बताएका छन्। त्यसकारणले यो घटनामा कारक होइन?’ भिडीयो उनले सोधेकी छन्।यहाँ पत्रकारहरूको यस्तो तप्का छ जसले सुशान्त नराम्रो भएको भनेर अ’न्धाधुन्ध लेख्छ।
तर उनीहरूले सञ्जय दत्तको नराम्रो कामलाई भने आकर्षक देख्छन्,’ उनले भिडिओमा भनेकी छन्। यसैगरी भारतका पूर्व सासंद सञ्जय निरूपमले आफ्नो ट्विटमा ‘छिछोरे’को व्यापक सफलताका बाबजुद् ६ महिनाको अवधिमा ७ वटा सिनेमा गु’माएको लेखेका छन्। बलिउडको यस किसिमको क्रु रताको उनले च र्को आ लोचना गरेका छन्। सुशान्तसिंह राजपुत मुम्बईको बान्द्रास्थित आफ्नै घरमा आइतबार मृ, त भेटिएका थिए।यसै क्रममा बलिउड अभिनेता सलमान खान, निर्माता तथा निर्देशकहरू करन जोहर, एकता कपुर तथा सञ्जयलीला भन्साली सहित आठ जना वि’रूद्ध फौजदारी मु’द्दा परेको छ। बुधबार एक वकिलले उनीहरूलाई अभिनेता सुशान्तसिंह राजपुतको निधनको कारण भन्दै बिहार अदालतमा मुद्दा दायर गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यम टाइम्स अफ इन्डियाले जनाएको छ। टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार वकिल सुधिर कुमार ओझाले सलमान, करनसहित आठ जनाका विरूद्ध
मु’द्दा दा’यर गरेका हुन्।
अदालतले आगामी जुलाई ३ को सुनुवाइ मिति दिएको छ। ओझाले दा’यर गरेको मुद्दामा आदित्य चोपडा, साजिद नाडियडवाला, भुषण कुमार र निर्देशक दिनेशको पनि नाम छ। टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार यी आठ व्यक्तिले सुशान्तका फिल्म रिलिज हुन बा’धा पैदा गरेको र यिनीहरूकै कारण सुशान्तलाई फिल्मी कार्यक्रमहरूमा पनि बोलाउन छाडिएको मुद्दामा उल्लेख छ।वकिल ओझाका अनुसार उनले से’क्सन ३०६, १०९, ५०४ र ५०६ अन्तर्गत मुद्दा दायर गरेका हुन्।
यसका साथै उनले साक्षीको सूचीमा अभिनेत्री कंगना रनावतको नाम राखेका छन्। योग्यता र क्षमता नभए पनि स्टार कलाकारका भाइ-भतिजा, छोरी-चेली भएकै कारण बलिउडमा प्रवेश गर्ने र स्थापित हुने मौका धेरैलाई मिल्यो । यसको ठीक उल्टो पाटो ड’रलाग्दो छ । कतिपय कलाकार अब्बल क्षमता र कौशल भए पनि परिवारवादको घे’राभित्र पर्न नसक्दा छायामै परे ।बलिउडकै स्थापित कलाकारहरुले सुशान्त सिंह राजपुतलाई त्यस्तैमध्येका एक अभिनेता ठानेका छन् ।
करण जोहर, आलिया भाट लगायत कलाकारले जब सुशान्तको निधनमा श्र’द्धाञ्जली दिए, त्यसपछि परिवारवादको बहस सतहमा उठेको हो । धेरैले सामाजिक सञ्जालमा करण र आलियालाई दोहोरो चरित्रको मान्छे भन्दै क’ठोर आ, लोचना गर्न थालेका छन् । यस्तो किन पनि भनियो भने, सुशान्तलाई करण जोहरको शो ‘कफी विथ करण’ मा आलियाले खिल्ली उडाएकी थिइन् ।यतिसम्म कि,बाबु र आमाको प्रभावबाट बलिउडमा छिरेकी आलियाले सुशान्तलाई चिन्दिन समेत भनेकी थिइन् । जब कि, सुशान्त कठिन मेहनतबाट
बलिउडमा स्थापित भएका थिए । उनै आलियाले सुशान्तको निधनबाट आफू स्तब्ध बनेको भन्दै गहिरो दुख व्यक्त गरेकी छन् । उनले यो दुख व्यक्त गर्ने
शब्द नै नभएको भन्दै उनको परिवारमा समवेदना प्रकट गरिन्बलिउडकर्मी गौरव मिश्राले आलियाको यस्तो ट्वीटलाई ‘फेक सि’म्प्याथी’ भन्दै टिप्पणी गरेका छन् । उनले त बलिउडकर्मीले ‘गोहीको आँशु’ झारेको भन्दै आ’लोचना समेत गरे ।उनले भनेका छन्, ‘सुशान्तले भनेका थिए कि, कसैले पनि उनलाई पार्टीमा बोलाएका थिएनन् ।
उनले बलिउडले आफूलाई परिवारको सदस्यको रुपमा स्वीकार नगरेको बताएका थिए । उनी सधैँ यही कुराले दुखी र निराश थिए । बलिउड स्टप हि प्पो’क्रेसी एन्ड घ’डियाली टि’यर्स‘ ।’त्यसो त, सुशान्त अब्बल अभिनेता हुँदा हुँदै पनि धेरै ठाउँबाट उनलाई अघोषित रुपमा व’हिष्कार नै गरिएको थियो । जस्तो कि, ‘काइ पो चे’ जस्तो सफल फिल्ममा उनले डेब्यू गर्दा नै आफुलाई पुष्टि गरिसकेका थिए । ‘पिके’, ‘केदारनाथ’ जस्ता फिल्ममा सुशान्तले सम्झनलायक काम गरे । कठिन मेहनतबाट बलिउडमा स्थापित बनेका सुशान्तले फिल्म अवार्ड पाउनुपर्ने गुनासो बलिउडमा सुनिरहन्थ्यो । यतिसम्म कि, कंगना रनोटले त ‘ग’ल्ली ब्वाइ’भन्दा ‘काइ पो चे’ धेरै हिसाबले अवार्डका लागि योग्य फिल्म रहेको टिप्पणी गरेकी छन् ।
विडम्वना कस्तो भने, हरेक वर्ष सुशान्तको अभिनयको प्रशंसा त धेरै हुन्थ्यो । तर उनी फिल्म अवार्डमा नै बोलाइँदैनथे । यतिसम्म कि, प्रोड्युसरहरुको पार्टीमा समेत उनलाई बोलाइँदैनथ्यो । यसको मतलब सुशान्त एक किसिमले उपेक्षित वा व’हिस्कृत जस्तै थिए । त्यसो त, सुशान्त आफैँ पनि कतिपय सन्दर्भमा बलिउडले परिवारको सदस्यको रुपमा स्वीकार नगरेको गुनासो गर्ने गरेका थिए ।‘अन्तिम फिल्मका समान दृश्य’भन्दै तीन अभिनेतालाई एक साथ
श्रद्धाञ्जली ! – सानो पर्दाबाट करिअर सुरू गरेर बलिउड अभिनेता सुशान्तसिंह राजपुतले छोटो समयमै फिल्मी क्षेत्रमा जबरजस्त प्रर्दशनी गरे। त्यसैले आइत बार मुम्बईस्थित अपार्टमेन्टमा उनले देहत्याग गरेको खबरले पूरै देशमा ध’ क्का परेको छ।उनको निधनमा बलिउडका चर्चित हस्ती तथाप्रशंसकले दुःख प्रकट गरिरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा भने सुशान्तको फिल्मको एक दृश्यको चर्चा भइरहेको छ।
यो दृश्य सामाजिक सञ्जालमा एकाएक चर्चामा आउनुको कारण हो, दिवंगत हलिउड अभिनेता हेथ लेजर र केही समयअघि मात्र निधन भएका भारतीय अभिनेता इरफान खानका फिल्मका दृश्य।सामाजिक सञ्जालमा सुशान्त सिंहको ‘कार सिन’ भा इरल भएको छ। यो दृश्य सुशान्तको अन्तिम फिल्म ‘छिछोरे’ को हो। इरफानको अन्तिम फिल्म ‘अंग्रेजी मिडियम’ र हेथ लेजरको अन्तिम फिल्म ‘द डार्क नाइट’मा पनि यस्तै दृश्य थिएः कारको झ्यालबाट बाहिर हेरिरहेको।यी तीअभिनेताको अल्पायूमै निधन र उनीहरूका अन्तिम फिल्मका काल्पनिक दृश्यमा देखिएका समानताले अहिले सामाजिक सञ्जालमा धेरैको ध्यान खिचेको छ।
यो दुखद संयोगले शुभचिन्तकलाई झनै वि क्षिप्त पारेको छ। अहिले धेरैले यी तीनै कलाकारलाई एकैसाथ श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरिरहेका छन्।‘द डार्क नाइट’मा हेथ लेजरको ‘जोकर’ पात्र निकै चर्चित बन्यो। उनको सन् २००८ मा निधन भएको थियो। यसैगरी अभिनेता इरफान खानको बलिउड यात्रा भारतमा मात्र नभई देशबाहिर पनि अविस्मरणीय रह्यो। उनको यसै वर्ष क्यान्सरका कारण निधन भएको थियो। भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार सुशान्तसिंह केही समययता डि प्रे स नसँग ल डि रहेका थिए। पछिल्लो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अनुसार डाक्टरहरुले उनको निधनको कारण देहत्याग नै भएको पुष्टि गरेका छन्।